Kedu ihe ị na-eme mgbe ị risịrị nri abalị ekele? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Mgbe ekele nri abalị - ihe ngwọta nye nsogbu
Kedu ihe ị na-eme mgbe ị risịrị nri abalị ekele?
Ihe Asaaime mgbe inyesị nri abalị
Nwee Abali Egwuregwu.Mgbe ịkpọọ ndị ọbịakaụlọ gị makaEkeleafọ a, jụọ hakaweta egwuregwu egwuregwu kachasị amasị ha.
Mepụta Akwụkwọ Ezinụlọ.
Dee Akwụkwọ Ozi Na-enye Obi .tọ.
Mee mma maka ezumike ahụ.
Ọrụ afọ ofufo ọnụ.
Nwee Onyinye Okike.
Nwetụla mgbe ị na-ero ụra, na-ero ụra, na-echegbu onwe gị, na-eriju afọ mgbe nnukwu nri ụbọchị ekele ahụ? Taa, m ga-agwa gị ihe kpatara ị ji eche otu a, na m ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ maka otu ị ga-esi mee nke a ma nwee ike ịnụ ụtọ ekele, ịnwere ike ịnụ ụtọ ume ị nwere, ma ị nwere ike iri nri nri na-edozi ahụ. (egwu dị egwu) Nke mbụ, gịnị na-akpata ụra ihi ụra? Ọfọn, nke mbụ, ị ga-ekiri abalị ahụ. I hiri ụra nke ọma n’abalị bọtara ụbọchị Ekele? Ọtụtụ oge, ndị mmadụ na-a drinkụbiga mmanya oke, nke pụtara na ụlọ ahịa ike ha ga-adị ala site na mgbe ha tetara na ekele.
Ọtụtụ n’ime ndị mụ na ha kwurịtara okwu, ọtụtụ n’ime ndị anyị kwurịtara okwu, mmiri gwụrụ ha ike n’ụbọchị inye ekele. Yabụ ị lere ihe ndị a niile anya wee tinyezie ihe oriri. Ha na-eri nri riri nne okpukpu anọ karịa nri nkịtị na-eri kwa ụbọchị.
Iri nri, kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, bụ nri hog kasịnụ ụwa nwere. Dị ka ihe atụ, anyị na-eri nri okpukpu iri karịa nke anyị chọrọ iji dịrị ndụ. Na nyocha ahụ emere na 1940s.
Ya mere, cheta, 90% nke ume ị nwere n’ime ahụ na-abanye n’ime nri nri. Mgbe ị na - ekwu maka ike ọgwụgwụ, mgbe ị na - ekwu maka ihi ụra, mgbe ị na - ekwu maka ike dị ala, ọ bụ maka ahụ gị kwesiri iji ụlọ ahịa ike ya kwusi nri. Na mgbakwunye, nri abalị nke inye ekele nwere ike ịnwe 80 na 90% carbohydrates na shuga, nke pụtara achịcha niile ị nwere ike iri, ihe oriri niile, shuga niile ị na-a inụ n'ọtụtụ mmanya, mmanya, gluten ruo atọ tingnọdụ ala na nri gị. usoro maka ụbọchị.
Ndị na-edozi ahụ nwere ike ire ere, carbohydrates nwere ike gbaa ụka, abụba nwere ike ịga. Ihe ị na - eme bụ ibufee sistemu gị ọtụtụ kemịkal, ọtụtụ nsị, ma tinye GMO na nri ndị dị ebe ahụ, ị ​​gbakwunye nri niile? Ọ dị ebe ahụ, ndị na-akụ, pasta ma ọ bụrụ na i nwere nke ọ bụla, ihe niile na-enye nri, ọ bụ naanị ụzọ esi edozi maka ọdachi. Ma ọ bụrụ na ị gbakwunye nchekasị, ọtụtụ ndị na-echegbu onwe ha na ezumike, ha nwere ike ịmasị ike iri nri zuru ezu, ha nwere ike ịda mbà mgbe ndị ọbịa bịara.
Mgbe ike gwụrụ gị, ị nọ n'ọnọdụ ọmịiko, nke pụtara na mgbaze gị na-akwụsị, ọ na-akwụsịlata nke ukwuu. Mgbe usoro nri gị ji nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ, maa gịnị? Ihe oriri ị tinyere ma tinye na wụsara na-anọgide n'ime sistemụ gị ma jiri ụlọ ahịa ike gị. Ihe ọzọ kpatara ike ọgwụgwụ na ekele bụ ọrụ ịnọ otu ebe.
Kedu ihe ndị mmadụ na-eme na Ekele? Ha anaghị eme ihe ha kwesiri. Ha na-ele egwuregwu bọọlụ ma ọ bụ na-anọdụ ala n’ihe ndina ma ọ bụ na-akparịta ụka. Ibi ndụ nkịtị, ibi ndụ otu ebe.
Gịnị ka ị ga-eme? Ana m akwado ka ịmepụta nri ndị anaghị eri anụ, nri ndị ọzọ maka Ekele, gosipụta efere mkpụrụ osisi, mee ụdị salads abụọ ma ọ bụ atọ dị iche iche ndị mmadụ nwere ike iri, belata oke protein. Rie nụ opekata mpe 75% karịa nke ị na-eri na inye ekele. Na-a plentyụ nnukwu mmiri.
Ọ dị ezigbo mkpa inye mmiri onwe gị. Mgbe mmiri gwụrụ gị, ahụ gị na-echekwa ụlọ ahịa ike gị na usoro ya. Really chọrọ n’ezie ka e nye gị mmiri wee nye ekele ma ị ga-enye mmiri oge niile.
Ka ị na-eri nri dị ndụ karị, ị ga-enwe ahụ ike. Ọ bụrụ nnọọ na i mebie ya, sị, 'Gịnị bụ ihe a? Ọ bụrụ na m tinye nri dị elu, ume ike n'ime ahụ m, mgbe ahụ m ga-enwe ike dị ukwuu n'ahụ m, 'mgbe ahụ ọ ga-amịpụta ike m n'ebe m nọ.' Nke ahụ na-aga maka ihe niile na ndụ gị yana ihe niile gbara gị gburugburu, ọkachasị nri.
Naanị ile anya ya. Tupu i tinye ya n’ọnụ gị jụọ onwe gị, jụọ ajụjụ, nke a ọ ga-eme ka ugboro ugboro m na-ama jijiji ma nyekwa m ume, ka ọ ga-ebelata ma mebie ugboro ugboro m na-ama jiji? e ike m? Ihe obula esi nri, hazie, na mkpọ, anumanu anumanu, nke anumanu, akwa, mmiri ara ehi, ihe ndi di otua, oburu na ha abughi ihe aru, ma oburu na ha adighi nkpuru, ihe ndia nile gha wedata nkpu ogwu gi, dika mmanya. Ihe ndị ga - eme ka ikuku gị dị elu bụ mkpụrụ osisi ọhụrụ, akwụkwọ nri ọhụrụ, salads.
I nwedịrị ike ịme ihe ọ greenụ juiceụ na-acha akwụkwọ ndụ maka Ekele. Nke a bụ ihe dị mma n’ihi na ị na-enyefe ya ndị ezinụlọ gị. Isi ihe kpatara ike ọgwụgwụ na inye ekele na ihi ụra mgbe ị risịrị nri abụghị isi iyi dị ka ndị mmadụ na-ekwu.
Echere m, enwere tryptophan na mkpụrụ na mkpụrụ na organic na raw Tryptophan bụ amino acid ma nwee ike ịme ka ike gwụ gị n'ihi na ọ na-eme melatonin, na melatonin nwere ike ime ka ụra buru gị, mana ọ bụghị isi ihe kpatara ndị mmadụ ji ike gwụrụ ma ọ bụ na karịa. daa n'ụra ksgiving. Ndụmọdụ ọzọ m ga-ekwu dị ezigbo mma, ma ọ bụrụ na ị nwere ike, bụ ibu ọnụ oge na-aga n'ihu na inye ekele.
Naanị rie nri. You maara na ị ga-eri nnukwu nri na Oge Ekele, yabụ enwela nri? n'ụbọchị. Mafere nri ụtụtụ, tụọ nri ụtụtụ ụtụtụ, ma hapụkwa nri abalị ma ọ bụ nri abalị nke nwere ike ịbụ mgbe emechara nri Ekele gị.
N’iburu na ọtụtụ mmadụ na-eri nri abalị inye ekele n’etiti elekere 1:00 nke ehihie. na 4: 00 pm n'ehihie.
Ndụmọdụ ọzọ bụ ịkwaga nri abalị inye ekele gị tupu ụbọchị gara aga. Ọ bụrụ na ị rie nri elekere atọ ma ọ bụ anọ n’ehihie, ahụ gị adịla nwayọ nwayọ maka ụbọchị ahụ. Inwe nri abalị nke inye ekele n’ehihie ma ọ bụ tupu ụbọchị ahụ na-enye ahụ gị oge iji gbari nri n’oge mgbede.
Ihe m hụrụ n'anya ugbu a, na ihe ọtụtụ mmadụ na-eme, bụ na ha na-ewere enzymes. Nke a bụ otu ọnụ ga-enyere gị mgbari gị Thanksgiving nri a bit ngwa ngwa. Inweta ezigbo nri enzyme digestive dị ka VeganZyme ga - enyere aka mebie nri gị na ọ gaghị etinye ọtụtụ nsogbu na sistemu ma ọ bụ ahụ gị n'oge ekele.
Gbalịakwa izere carbohydrates. Gbalịa belata njuju, gbalịa belata nri ị na-eri. Nwere ike ịnwale igbutu ihe ọ bụla nwere shuga, achịcha, achịcha, ihe ọ bụla dịka nke ahụ.
Kama iri nri dum, rie nri ole na ole. Amaara m na nke a na-ada ike, mana enwere ike ịme obere mgbanwe na Ekele. Ha nwere ike gbanwee ọtụtụ mgbe Oge Ekele.
Kwere ya ma ọ bụ ugbu a, ọtụtụ mmadụ na-enweta 10-15 pound site na November ruo Jenụwarị. Gbalịa izere nke ahụ. Ọ bụ naanị ụbọchị You na-elekọta ahụike gị, echiche gị wee sị, 'Mba, agaghị m eri taa' ma ọ bụ 'Mba, agaghị m a drinkụ taa' na m ga-a waterụ mmiri kama, 'ma ọ bụ M ga-eri a salad kama, “Ma ọ bụ m ga-eri ike kama. Ndị a bụ ndụmọdụ m maka inye ekele.
Ndị a bụ ndụmọdụ m banyere otu esi egbochi ụra ahụ, mmetụta ahụ jupụtara na mmadụ ịnọdụ ala n'ihe ndina na enweghị ike ime ihe ọ bụla. Nwee ekele na ekele gị. Nwee ekele, nwee mmetụta ahụ, pụọ n’èzí, gagharịa mgbe ị risịrị nri abalị.
Bido ịgbanwe ndụ gị. Bido gbanwee ụzọ ekele gị si adị. Inye Ekele Jikwaara Ezi Ahụ Gị Ekele Nke Ọma Gbanwee Ekele Gị ma mepụta Ekele Dị Mma maka gị na ezinụlọ gị.
Dị ka onyinye efu, pịa Pịa njikọ dị n'okpuru maka ntuziaka zuru oke maka iri nri dị mma. Abụ m dr otu. Echefukwala ịdenye aha na ọwa anyị, pịa mgbịrịgba ngosi ntakịrị.
Y’oburu n’inwe ekele di ike, mee ka anyi mara n’ime ihe ndia n’ahu n’okpuru ma hu gi n’oge ozo, ma dika o dikwa, bie obi uto ma biri ndu di ike. (egwu dị ndụ)
Gịnị ka m ga-eme ụbọchị mgbe Ekele?
Lee ụfọdụ ihe ọchịụbọchị-mgbe-EkeleNtụziaka echiche ịtọhapụ ohere na ngwa nju oyi gị naimeuto gi uto.
Turkey ite achịcha.
Ctọ Nduku Pancakes.
Ihe na-eri nri Mushrooms.
Ibu Nduku ofe.
Julianne: Nabata na 'Ndụ 808'. Ememme ncheta afọ ọ bụla nwere ike ịbụ ọrụ na-aga nke ọma maka ụlọ nri ọ bụla. ZIPPY NA-EME MFE.
John: Ọ B IFR YOU NA ARE B SLA ohu na-aba n'anya, achọghịkwa ka ị nwee nnukwu echiche. BCANYA B TO TOB 80 808.'WER H HERE N'ANYA Mpaghara.
ANY CON JIRI EGO NA-EGO NA ZIPPY'S. ZIPPYESES. IHE karịrị afọ iri ị na-ekele unu maka ọtụtụ ezinụlọ ọgwụgwọ.
GWARA ANYOU KWES THERAC NA AKA NA IHE HA NA-EJI.EZI AKW PKWỌ AKW CONKWỌ AKW CONKWỌ AKWOVKWỌ ND ST NA-ACH ,TA, MASH P PATATOES, CRANBERRY NA SWEET SWE.
B ONLR ONL KWES ONLR UN KWES ONLR 16 KWES 16R N N'OVLỌ NỌB 16RBER NỌB 16R 16 NKE 16 NA SAVE gburugburu $ 15. Ya mere, ị ga-akpọ ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa anyị. M NA-ERI ya ka m riri ya na-ekele gị.Ọ bụrụ na ị na-egosi anyị TURKEY dị iche iche, tinye ihe ndị a niile na ị ga-apụ na ngwaahịa a.
Ahụtụbeghị m nke a. Nke a dị obere. Kpoo ya na.
ANYI meriri puku kwuru iri ebe a. Trini: M ga-anwa. EGO KA Ọ BORCH IHE Ọ B ALA NTOR TA SPON NA EGO.
NA M INWETA MMIRI. Nke ato: DAB THE EDGES. Ọtụtụ afọ gara aga.
TWICE.LIKE ịnyịnya ígwè. NA gburugburu FLAPS.
AHA M IHE MAGH YOU KA YOU chọghị ijupụta n ’ọtụtụ ihe. IAGH CL EMEBI. KA Ọ BDRD N’ THELỌ.
Anyi nwere mmanu. 350 ogo. Banye ya na-eto ya maka nkeji abụọ na mpaghara ọ bụla.
Ruo mgbe ọ ga-enweta CRISPY. TRINI: OK. Ọ B ISR IS na ọ na-ere ọkụ na-ekwu nke abụọ nnata unu na-ahụ na-a-adịghị mma PATTY, na anyị na-ada PANKO.
ANY HAVE nwere ụfọdụ ndị na-agba gburugburu, na-achọ obere ntụ ọka, anyị na-agbakwunye ụkwụ ụkwụ na Turkey na ngwongwo na-echekwa, jikọta ya, mee ya, KWESVERR IT KWES HR H HT NA Mee KA Ọ B E PB PR,, Mee KA Ọ B THAT NA EGWU NA Mmiri. IT NA FRY IT.Trini: Ebe a ka emechaala mechie.M ga-anwa.YAAH.JUSE were ya .Trini: KA M NWA O.MM.MY CHINEKE.HARA YA N'anya.
DELICIOUS.THIS B SO KERE KERE. Daalụ.Trini: Ọ Dị ka Nri zuru ezu. M hụrụ ya n'anya. Anyị chọrọ icheta onye ọ bụla na-ekele ya ka ọ mara mma TURKEY. $ 15 Gbanyụọ.
YOUB CANR ONL KWES ONLR T URB TRUR TURKEY, Ọ B IFR YOU na ịchọrọ TURYY onwe gị, YOU nwere ike ịzụta TURKEY I nwere ụfọdụ awa abụọ nke ikuku ị nwere ụdị a dị mma, ị gaghị abụ ohu na ebe obibi .MM.Julianne: WOW.PRETTY AWESOME.I NA-AH Z ZHIP N’ANYA ZIPPY DRE MADAD, MA UGBUA Ọ hụrụ ya n’anya.
Achọrọ m ha n'anya site n'aka ekpe Joseph. Julian ne: Achọghị m imefusị nri. John: IHE ọma.
Gịnị ka ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ime mgbe nri abalị?
7 Ihe.Nwere ike ime mgbeIri nriNri Anyasị EkeleNa mbido
Naanị, onye ọ bụla? Wepụụfọdụgame board ma tie mkpu na onye ọ bụla ruo mgbehaGbanwee gburugburu tebụl ma dị njikere iji merie.
Nwetanka gi. Mba, anyị anaghị ekwu biya.
#TBT, manadị kan'ezie.
Were bulie onu.
cyclocross igwe kwụ otu ebe
Obi ụtọ na-ekele! Oge inye ekele ga-ebu ukwu n’afọ a. Mana iji zere ọgụ ọgụ ọzọ, anyị mepụtara thelọ Loud na Casagrandes Thanksgiving Se Guide. Ka anyị mee nke a! Ihe mbu bu ihe mbu, Lori na Bobby di ka peas abuo na ukwu Bobby mu onwe m abughi peas abuo.
Nke a mara mma. Yabụ na ọ bụ ikuku iji tinye ha ọnụ. Ma olee ebe? Lori, Bobby, anyị chebere gị ebe.
Mba, anyị chebere gị ebe. Um, olee maka anyị ga-anọdụ ala n’etiti? N'etiti etiti, nnukwu. Nye kwesịrị ịnọdụ ala n'akụkụ Lori ugbu a? Kedu maka Lisa? - Ihendori? - Ndo? Ndo nwanne na nwanne.
M na-eme ule na-agba ọsọ na Gravy Bot, robot m wuru iji hụ na nkesa ihendori ahụ. Ana m eziga bot dị ọcha. Mba, mba ndị ọzọ bots.
Ezi ihendori, nke meriri. Hapụ ya ebe a. Nke a bụ obere okirikiri nchekwa ihendori.
Carl enwere ike ịnọdụ n'akụkụ Lori? Lori, enyi m, kwe ka m bụrụ onye ndu gị taa. Enwere m ike igosi gị ebe kachasị nwee ịhụnanya na obodo ọma anyị. N'ezie mara mma.
Ọfọn, Carl apụla. Oh m mara Kedu maka Abuelo? Ọ na-enwekarị asịrị, dị ka Lori. Anaghị m akụ aka.
N'agbanyeghị, ị nụrụ Vito Filiponio ọcha ya ezé? Yabụ na toki ha ga-enwe ọtụtụ ihe ha ga-ekwu maka ya. Na-ekwu okwu nke toki, onye Ihe ọ bụla a isi N'ezie osi ite, ọ ga-hoo haa na-anọdụ na isi nke okpokoro. M na-eme tur-goosa.
Nduru ke ọgazị juru na toki. Ugboro atọ nnụnụ, ugboro atọ ka ụtọ. Lynn Nkechi
Were S ebe. Anyị na-esi nri. Ebee ka onye isi nri Casagrande ga-anọdụ ala ugbu a? Ugh, a sị m na ị ga-anụ isi tamale ama ama nke Abuela.
Enweghị Roberto, enwere naanị tamales maka nri abalị. Ah, na-esote Bobby. Ebe ọ na-enwe mmasị isi nri ha ọtụtụ, mee ka ha bụrụ di na nwunye dị ụtọ na tebụl.
Ọ na-aga n'ihu. Otu ihe dị mfe bụ na ụmụ ejima ahụ nọkọtara ọnụ, mana ebee? Scram! Nwanne oma. Mana dị ka ndị isi n'ememme oriri, ọ bụ ọrụ anyị ichebe nri a ruo echi, whoa, egwu.
Ha bụ di na nwunye a gụrụ. Ya mere, anyị na-etinye ha na njedebe nke okpokoro ahụ. Ga-anya na kichin maka eji megharịa ọnụ agbachitere.
Ugbu a enwere ohere n'etiti ụmụ ejima na Abuelo. Onye nwere ike ịnọdụ ala ebe ahụ, ama m Luna. Gị na Abuelo nwere ike ịdaba na nkewa abụọ na-eri nri abalị. Abụọ dị iche iche ezinụlọ Ma nke ukwuu jikọrọ ♪♪ Olu, ogbaaghara Ma anyị ka na-jamming ♪♪ Ọnụ dị mma mgbe anyị na-kwekọkwa harmony Ọ dị m mma! Anyị enwere ike itinye obere nwa Lily na ọmarịcha Carlitos n'akụkụ ibe anyị ugbu a? Ọ bụ ụzọ oke ọgbaghara.
Ka anyị tinye Lily ebe a. Mana anyị debere Rita n'akụkụ ya n'ihi na nne maara nke ọma. Bịa, mmanụ a honeyụ, ka na-ekpo ọkụ site na draya.
Aww! Carlitos nwere ike iso CJ na Carl gaa ebe a n'ihi na dịka nwanne nwoke, ha nwere nkwado ibe ha mgbe niile. Piggyback na-agba ịnyịnya! Ooh, achoro m nke ozo! Na Luan nwere ezi uche iji nọdụ n'akụkụ CJ ka o wee nwee ike ịgwa ya njakịrị ohi. 'Mmiri' ị na-ekwu na anyị tinye ụfọdụ egusi Ya mere, olee ebe Tío Carlos ịchọrọ ịnọ? Oh m maara Kedu banyere n'akụkụ Lisa? Ha nwere ike gbanwere ihe ọchị dị n'etiti ma nyefee nri ha.
Enwere m ike ịme ka ichere gị karịa nke ọma na eziokwu dị ụtọ? Licorice, ọ bụ? Ndi ama ọfiọk ke Cesar ekedi kiet ke otu akpa fans? Oh, ị naghị ekwu nke ahụ. Ahụrụ m salads nwoke ahụ n'anya. Nwere ike Leni na Lynn nọdụ ọnụ ọzọ? - Hey, Lynn. - Sup, Bobby? Diggin 'anya ọhụrụ.
Ndị a abụghị maka ejiji. Ihe ndị a bụ uwe ogologo ọkpa m. Oh-oh, uwe ogologo piss bụ ihe rụrụ arụ.
Uh, chere. Mana onye kwesiri ịnọdụ ala n'akụkụ Leni? Oh, Carlota. Ha nwere ike fesaa frugal ọnọdụ n'elu nri abalị na anya dị ukwuu mgbe ha na-eme ya.
Lelee ya. Achọtara m ụfọdụ ọmarịcha uwe maka gị n'ụlọ ahịa na-ere ihe. Ahụrụ m mmadụ abụọ n'ime ha ka anyị nwee ike ịsọ mpi.
Oh, ugbu a ị ga-enweta uche nwata niile. Ebee ka Lynn ga-anọdụ? Ọ na-eme ihe niile na ihe oriri dị ọkụ. Know maara nke ahụ.
Abụọ eriri abụọ, pickles ọzọ, yabasị ọzọ, okpukpu atọ na-ekpo ọkụ. Na nke ahụ nwere ike ime maka ọmarịcha ọgba aghara. Ya mere, ka anyị debe ya na nsọtụ ọzọ nke tebụl.
Ma chere, ugbu a ọ nọ n’akụkụ Lana, ka anyị kwuo eziokwu. Lana ga-ahụ isi ísì ahụ. Anyị emechaala, mana anyị na-efu mmadụ ole na ole.
Ronnie Anne na Tía Frida nwere ike ịnọ n'akụkụ ibe ha? Mba. Kedu maka anyị itinye Lincoln n'akụkụ Ronnie Anne n'ihi na ha adịla oke - egwu. - Ọnwụ.
Ma chere, ugbu a Lisa nọ ọdụ n'akụkụ Lincoln. Do chetakwa na Lincoln na-ezigara ya ihe ọzọ site na nchọta Lisa? Dị Nsọ! Jisie ike. Ọfọn, nke ahụ enweghị ike ime ọzọ, ochie Switcheroo.
Na hey, ugbu a Lisa nwere ike ịkụziri Ronnie Anne physics nke skateboarding. Ọ dị ezigbo mfe achọghị m ịma. Tía Frida ga-aga ebe a na-esote Rita, maka na a bịa n'ihe eji achọ mma, ha abụọ nwere nnukwu mmekọrita.
Ọ bụ nchikota zuru oke nke azụtara na arụrụ n'ụlọ. Hey, Frida na Rita. Kwesịrị ịmalite azụmahịa.
Aha ha na-agbanye n'ire gị n'ezie. Ma nke ahụ bụ naanị Lucy na Maria. Ma chere obere oge, gịnị jikọrọ ha abụọ? Oh, nke ahụ bụ naanị kranberị ihendori.
M sụrụ ngọngọ n'ụzọ. Kranberi ihendori dị ka ọbara. Nke ahụ ga-abụrịrị ụzọ isi mee Lucy ọchị.
Honey, Lucy na-amụmụ ọnụ ọchị, were igwefoto! Anyị mere ya! Tebụl na-enye ekele juru eju. Ugbu a jupụta bell. Afọ juru m.
Lee gị oge ọzọ na Loud House na Casagrandes Guide.
Howbọchị ole mgbe Ekele gasịrị ị nwere ike iri nri fọdụrụ?
ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ
Ọ bụrụ na ị rie nke fọrọ afọ, ị ga-anwụ. N'ezie, ha nwekwara ike ịdị oke mma ma nweghi mmetụta ọ bụla na-adịghị mma. Mana nde mmadu n’uwa nile amaghi na nkpuru ahihia ahihia na abali a n’abali gara aga bu ihe egwu nzuzo, ma ee, ohere i nwere ike inwu - ihe a nile n’ihi na ichoro ihapu ihe ndi ozo na uzo gi ma banye n’ime ya. dezaati.
Ma gịnị kpatara nri fọdụrụnụ ji dị oke egwu ma nwekwaa ụdị nri ka ndị ọzọ nwee nsogbu? Nọrọ na-ege ntị ka anyị na-enyocha ihe kpatara na etu oyi poteto nwere ike isi kwụsị ndụ gị. Site na mgbe ahịhịa na-ekpo ọkụ hapụ nri ahụ wee kụọ efere gị, nje bacteria na-amalite ịwakpo ya ma mụbaa na oke egwu. May nwere ike ịrụ ụlọ kichin dị ọcha, mana nje bụ ebe dị isi ike ma nwee ike ịdị ndụ karịa kemịkal siri ike.
Na mgbakwunye, imirikiti ọmụmụ egosila na ọtụtụ mmadụ anaghị asacha aka ha nke ọma iji hapụ ọnụọgụ na ọnụọgụ nje na-eme ka mkpịsị aka gị nwee obi ụtọ banyere ụlọ ha na stovu ha. Ihe a ọ pụtara n'ezie? Odi mma, imara efere i ji aka saa? Naanị ncha na-enweghị esemokwu zuru oke na-egbu nje, n'ihi ya, o yighị ka ị ga-ejedebe na umengwụ abụọ ma ọ bụ atọ gafere ogbo, ọtụtụ nje ndị na-atụ anya na nri gị ka dị. Ogbo gị n'onwe ya bụ nirvana nje, n'agbanyeghị, na ọtụtụ nri ndị na-eri nri na-ejupụta n'ụdị nje bacteria dị nzuzu.
Oge ọ bụla i ji hichaa efere gị hichaa efere gị, ị ga-ehicha obere nhicha ma mechie nje ndị ọzọ na-emerụ ahụ iji hụ na ha batara nri gị na ahụ gị. Mgbe ahụ n'ezie enwere aka ruru unyi gị na ọtụtụ ijeri nje na-abata na mbara ala dị iche iche kwa ụbọchị. Gwa onwe gị eziokwu- Olee mgbe ikpeazụ ị sachara aka gị tupu ị rie nri? Anyị chere otú ahụ.
Naanị buru n'uche, oge ọzọ ị ga-eri burger na ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ wee rute otu karama nke ketchup ahụ, ọtụtụ narị mmadụ na-eleba anya tupu ha amalite ijizi buns ha. Ndị ọkà mmụta sayensị na-atụ aro na ịnwere oge iji gaa nri na 'mpaghara dị egwu' kwesịrị ịdị n'etiti 4 na 60 Celsius C (40 ruo 140 degrees Fahrenheit). Ndị a bụ okpomọkụ nke nje bacteria na-eto eto kacha mma na kwa nke abụọ nri gị na-etinye na mpaghara a dị ize ndụ, ọtụtụ nje bacteria, na ị ga-eweghara n'oge na-adịghị anya.
Ndụmọdụ anyị bụ ka ịtutu nri ozugbo site n'ite ọkụ na-enwu n'ọnụ gị - ọkụ na-ere ọkụ ị ga-enweta ga-ebibi nje ndị dị n'ọnụ gị na akpịrị gị, n'ihi na ee, nje ndị na-emerụ ahụ dịkwa ebe ahụ. Lee, ọbụnadị nke gị n’ime adịghị nchebe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ mmadụ, na-eri nri oge ọ bụla mgbe ị na-ekiri ihe ọhụụ ọhụụ nke Ihe Ọmụma, ma mgbe ị risịrị nri ị hụrụ na ị nwere ọtụtụ maka echi ahapụla.
N'ọnọdụ ahụ, ị ​​nwere ike ịme dị ka mmadụ nkịtị ma na-arapara nri na nri nke fọdụrụ na Tupperware ma ọ bụ ikekwe kechie ha na plastik na-arapara na ngwa nju oyi. Kẹle ya dụ unu mma. Ma chere, ọ bụrụ na ị ga-eri nri fọdụrụnụ, enwere ụzọ iji belata ihe egwu nke nri emebi.
Nke mbụ, ị kwesịrị ịmara na nyocha 'isi' ma ọ bụ 'ụtọ' ahụ abụghị ezigbo ụzọ iji chọpụta ma nri ọ ka dị mma iri. Imirikiti nje anaghị esi isi ma ọ bụ detụ ire dịka ihe ọ bụla, ọbụlagodi na ọnụ ọgụgụ buru ibu, yabụ na-esi isi, na-ele anya, ma na-atọ ụtọ zuru oke, n'eziokwu, nje na-echere gị igbu gị. FDA na-atụ aro ka ịchekwa ihe ndị fọrọ afọ karịa ụbọchị anọ.
Mgbe nke a gasị, ọbụlagodi na a na-eme ha nju oyi, ha kwesịrị ịtụfu ha. Ọ bụrụ na ị kpọnwụrụ nri ị nwere ike ịme ya n'enweghị nsogbu ọ bụla maka ọnwa atọ, mgbe nke a gasịrị, ọha mmadụ nwere ike iji Ice Ice mepee ma malite ịmalite ọzọ, n'ezie mba, n'ihi na ọnwa atọ nri na-atọkarị ụtọ, ọ bụ ezie na ọtụtụ Isi mmalite na-adọ aka na ntị ihe egwu nke iri oke nri oyi kpọnwụrụ ogologo oge, anyị chọrọ ịkpọ BS n'ihi na na Jenụwarị 17, 1951, ndị sonyere na nri abalị iri asaa na asaa nke Explorer's Club na-eri mammoths dị afọ 250,000 gbara oyi na permafrost. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’isi ọnwụ ka i jiri ndụ gị gwurie egwu na iri nri nri, ihe kachasị mkpa icheta bụ isi nri gị ruo mgbe ọ ruru ogo dị n’ime ma ọ dịkarịa ala 165 F (74 C) iji hụ na unu niile na-adị ndụ Gbuo nje bacteria.
Ọ bụrụ na ị na esi nri na ngwa ndakwa nri, gbaa mbọ na-atụgharị mgbe niile na ọbụna tụgharịa nri gị iji jide n'aka na ọ na-esiri ya mgbe niile. Ndị na-agba ngwa ngwa dị ka ite ite bụ echiche dị njọ maka ịmegharị nri ndị fọdụrụnụ n'ihi na ha anaghị ekpo ọkụ nri ọkụ iji gbuo nje. Ma ụdị nri dị a shouldaa ka ị na-agaghị agagharị ọzọ? Ewezuga ihe ndị a niile, ihe ndị a dị oke egwu: Poteto bụ nke kacha mma na akwụkwọ nri n’ụwa.
Ha na-eme ka ọkara nke burgers na fries, ma nwee ike ighe ya, sie ya, mee ya, sie ya, ma sie ya ike n’enweghị ezigbo ụtọ. Ọ dị mwute na poteto adịghị ụdị dịka ha yiri, na kemgbe ọtụtụ narị afọ, ha na-eme atụmatụ imegwara mmegwara ha ngwa ngwa maka ụzọ anyị si atụba ụmụnne ha n'ime ite mmanụ na mmanụ ọkụ kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na nduku mgbe niile, nke na-adịghị esi nri anaghị emerụ ahụ, ozugbo a na-esi poteto esi nri, ọ bụrụ na a hapụ ya ka ọ dị jụụ na ọnọdụ ụlọ ha nwere ike ịmalite ịmalite nje nke na-akpata botulism - nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị kechie poteto ahụ nke ọma na Wrap iji mee ka oxygen pụọ.
Botulism nwere ike ịdị na-agbanwe agbanwe na ọbụlagodi na ị na-eme ka nduku ahụ kpoo nwere ike ọ gaghị ezu iji gbuo nje. Oge ọzọ ị kpebiri ịpụ maka nri abalị anyị na-akwado ịhazi fries n'ihi na ọ bụ anyị ma ọ bụ ha na anyị ga-eri ha niile tupu ha ehichapụ mmadụ n'otu oge. Imirikiti ndị mmadụ nwere mmasị ịnwe ero na Pizza ha ma ndị a abụghị ndị enyi gị n'ihi na ero abụghị nri.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ onye na - eri ihe ruru unyi, ị kwesịrị ịma na mgbe ị bisịrị ero ma hapụ ha ka ha nọdụ na okpomọkụ, ndị enzymes na nje nwere ike imebi protein na ero ahụ. Nke a nwere ike ime ka afọ na-ewe iwe nke na-adịghị ka ọla dị ka poteto, nke na-eto eto botulism n'ụzọ nkịtị iji gbuo gị tupu ị rie ha, mana ka na-ata ahụ. Chicken dị mma maka ahụike gị, dọkịta ọ bụla ga-atụkwa aro nri ọkụkọ siri ike nke dị na anụ uhie.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-enweta ihe na-ekpokwu ọkụ, ọkụkọ bụ ajọ nrọ na-akpata oke nje. Mgbe obula ichoro okuko ichoro ijide n’aka na o ghaghi ikpo oku karia nari 175, ma ghara ihapu ya n’elu ogo iri abuo na abuo mgbe arabara ya. Ọ bụrụ na echekwara ọkụkọ gị karịa ụbọchị atọ, chefuo ya ma tụfuo ya.
Ndị ọkà mmụta sayensị ejighị n’aka ihe kpatara ọkụkọ ji dị oke egwu ma e jiri ya tụnyere anụ ndị ọzọ, mana ekwetere m na nke a nwere ike bụrụ otu ihe ahụ adịghị mma na matriks ahụ na - eme ka ọtụtụ nri dị ka ụtọ ọkụkọ n’ihi na igwe enweghị uto. O doro anya na ọkụkọ na-egbu ọchụ nke anyị, na mbọ ha igbu mmadụ na-ebido tupu ha akwaa akwa ha. FDA na-atụ aro ịhapụ ịhapụ nsen esi na friji maka ihe karịrị awa abụọ, ma ọ bụ otu awa na ihu igwe ọkụ.
Salmonella mụbaa nzuzu na àkwá ma nwee ike ịhapụ gị ikpe siri ike nke Hershey squirts - ma ọ bụ ọbụna na-egbu egbu. Iwu awa abụọ metụtara nri ọ bụla nwere akwa n’ime ya, gụnyere quiche na ọbụlagodi casserole. Salmonella anaghị akpa ókè ma ọ bụrụ na efere dị ka whack nke akwa n'ime ya, ọ ga-awụli elu ozugbo wee bido ọnụọgụ abụọ ebe niile - nke ahụ bụ usoro asexual nke mmegharị nje, n'agbanyeghị.
Yabụ oge ọzọ ịnọ n'ụlọ nkwari akụ ha nwere akwa na ire nri nri ụtụtụ, hapụ ha ma kpọọ ndị uwe ojii n'ihi na ụlọ nkwari akụ a na-achọ igbu gị. Kedu onye na-eweghachighị ihe ndị China fọdụrụ n'oge ahụ? Ọfọn, ndị na-achọghị ịnwụ, ọ bụ ha. Ọ na-enyo na osikapa dịkwa oke emerụ ahụ ike.
Mgbe ị na-eri ihe fọdụrụ, osikapa esi nri nwere ike ibute nje Bacillus cereus. Ọ bụ ezie na nje bacteria n'onwe ha nwere ike ibibi site na kpo oku kwesịrị ekwesị, ha nwere ike ịmalite ikpo ọkụ na oke nsị na-egbu egbu egbuola nje ahụ n'ezie, ụmụ ha na-ezo n'etiti ọka osikapa gị, na-eche ịbọ ọbọ maka ọnwụ nke ndị nna ha. Ihe dị ka nri Taliban ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iri osikapa, gbaa mbọ hụ na ị gbanyechara ọfụma, ma ọ bụrụ na enwere microwaved, nke ahụ pụtara ị wepụta ya, na-akpali ya, na iziga ya maka ụzarị microwave ọzọ - mana ka anyị chee ya ihu, ị maara na literally na-emetụbeghị nke a na ndụ gị n'ihi na ọ nweghị onye na-eme nri dị ọkụ n'elu nri anyị ma na-anwa ịgwakọta ya na nri oyi dị n'okpuru. Onweghi onye nwere oge iji mee usoro dị mma iji kpoo ọkụ, mana ị kwesịrị iwepụta oge n'ihi na mgbe ị nwụsịrị, ọ bụrụ na ị nwụọ na nsị nri, ị nweghị oge. Ọ bụrụ na ọkụkọ adịghị mma, nri mmiri na-aka njọ.
N'ezie, FDA na-atụ aro ka ị tụfuo nri mmiri ozugbo ma ọ bụrụ na a hapụrụ ya n'èzí na ihu igwe oyi karịa ihe karịrị awa abụọ ma ọ bụ otu elekere na ihu igwe ọkụ. Ọ na-apụta na nje bacteria na-atọ ụtọ na-eto eto na nri mmiri, ma ọ bụrụ na azụ ma ọ bụ oporo nke ị na-anụ ụtọ anaghị ejide ya wee kpoo oyi ozugbo, ị nwere ike ịnọ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ ogologo oge na-anwale ịmeghachi azụ mmiri ochie. . Nke ka njọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịkọ mgbe nri mmiri adịghị mma n'ihi na ọ dị mma, ọ na-esi isi mgbe ọ bụla jọrọ njọ - ọbụlagodi mgbe ọ dị ọhụrụ, were ya n'aka anyị wee rapara na-eri anụ anụmanụ, enweghị mgbe mmadụ ga-abanye n'ime mmiri nnu. nke alaeze Poseidon, nke a nwere ike ibute chi dị egwu nke oke osimiri na-etigbu gị afọ ọsịsa nke ihe mgbawa.
Imirikiti nri anyị gosipụtara na ihe omume a bụ anụ, nke nwere ike ime ọtụtụ n'ime ndị anaghị eri anụ ka ha nwee afọ ojuju banyere nhọrọ ụdị ndụ n'oge ahụ, kwenye na anwụghị anwụ nke gị na-eri anụ. Ọfọn, onye na-eri akwụkwọ gị kwesịrị iche echiche ugboro abụọ n'ihi na ọ gbanwere na ịmị ọkụ na mgbọrọgwụ na akwụkwọ nri nwere ike ịdị ka - ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọnwu - karịa ịmị ọkụkọ ọkụkọ. Akwụkwọ nri, letus, cress, na celery, iji kwuo ole na ole, bụ akwụkwọ nri jupụtara na nitrate ndị mara mma maka ahụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị ghaa nke ọ bụla n'ime akwụkwọ nri ndị a, nitrites nwere ike bụrụ nitrosamines, ndị a bụ ndị edekọtara nke ọma. Will ga-anọ ụbọchị na-esote na ime ụlọ ịwụ ahụ, ma akwụkwọ nri ga-enye gị kansa ozugbo ma ọ bụrụ na ị banyeghachi ya ọkụ. You chere na ịnọ n’udo n’ihi na naanị gị ka ị na-eri kale na anwụ? Chegharia ozo, ozo abughi nani ihe na ato uto, kama obu, chere na nwayọ ma chere ka i mehie nke imeghachi ya dika ihe fọduru ka o we wepu aru ndi na egbu egbu n'ime aru gi.
Ọ na-apụta na iri nri nri bụ echiche dị oke mma, na ụfọdụ efere kwa ụbọchị na Anyị echeghị na ọ bụ ihe na-emerụ ahụ nwere ike bụrụ ihe na-egbu egbu ọbụlagodi mgbe a na-emegharị ya nke ọma. Mgbe anyị lechara ihe omume a, anyị agaghị ata gị ụta ma ọ bụrụ na ị họrọla iri nri ọzọ, ma ọzọkwa, onye ọ bụla maara na pizza nke ụbọchị gara aga bụ nke kacha mma. nri zuru ezu, iji mejuo agụụ nkịtị ma ghara ibibi ihe ndị dị ize ndụ ma emesịa, ihe ọzọ bụ na nri dị oke egwu ma na-anwa igbu anyị oge niile, yabụ anyị kwesịrị iri nke ukwuu dị ka o kwere mee n'ihi na n'oge a ọ bụ anyị ma ọ bụ nri.
Planetwa a ezughi oke anyị abụọ. Ì chere na ị ga na-eri nri fọrọ afọ? You chọrọ ibi ndụ dị egwu? Onye ga - emeri n’agha dị n’etiti ụmụ mmadụ Ka anyị mara n’ihe a! Dị ka mgbe niile, ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, echefula ịmasị, ịkekọrịta, na ịdenye aha maka ọdịnaya dị ukwuu!
Kedu oge kacha mma iji rie nri abalị inye ekele?
Ihe kachasị ewu ewuogejeere mmadu oziNri ekelena United States bụ n'isi ụtụtụ. Nnyocha e mere n’afọ 2018 nke ndị ahịa U.S. chọpụtara na pasent 42 nke ndị zaghachirinụ malitere haNri abalị ekelen'etiti 1:00 pm na 3:00 pm.Sep 3 2019
Kedu oge anyị kwesịrị iri nri abalị maka inye ekele?
Nke Ka Mma Karịrị.Mm niile makaEkeleiri nri na mbụ - ọ nwere ike ịbụ elekere 2 nke ụtụtụ, elekere 3 nke ụtụtụ. ma ọ bụ ọbụna 5 elekere n'ụlọ gị, makwesịrịn’ezie bido n’oge mbụ n’abalị asaa ma ọ bụ asatọ.nri abalị.23 nke 2020bọchị 2020
Kedu ihe ị na-eri n'ụtụtụ mgbe ekele?
Rie. Emela onwe gị nkenkenri n'echi ya, ka Garcia dọrọ aka ná ntị. Anwala igbanaotu ụbọchịnke ịindụbiga mmanya ókè site n'ịgụ onwe gị: Ọ na-agba ndị mmadụ ume ka ha meerienri ụtụtụ ahụututu mgbe, na oatmeal bụ oke nhọrọ, nke ị na-ejighị ngwa nri gị mara mma ma ọ bụ mkpụrụ osisi (ọ bụghị ụdị akwadebe).15 nke 2017 Nọvemba
Ọ dị mma iri nri fọdụrụnụ na otu izu gachara?
Ma iji mee ka ha dị ọhụrụ ma nwee nje, jide n'aka na ị kechiefodurun'ime awa abụọ nkena-eje ozi. Echegbula ma ọ bụrụ na ha ka na-ekpo ọkụ; ọ bụ ihe niileỌ DỊ MMAịga na friji. Ọ bụrụ na echekwara na ngwa nju oyi, jide n'aka narie tokin'ime ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ. Ọ ga-edebe ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ.23.11.2018
Ogologo oge ole ka Turkey na-adịkarị mgbe a nyechara Oge?
Nke fọdụrụInye ekele turkeyna-ewe ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ na ngwa nju oyi na ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ na friza. Naanị jide n'aka na ị pịrị gịtoro toroapụ ọkpụkpụ mbụ.12.11.2020
I kwesiri iri nri ututu na Ekele?
GbanyeEkele, ndị mmadụ nwere ike ịhapụnri ụtụtụma ọ bụnri ehihieịchekwa ohere maka oriri na mgbede. Mana nke a abụghị usoro kachasị mma iji zere ịkwakọ na paụnd n'oge ezumike a,otunutritionist na-ekwu. Ọ bụ eziokwu naEkelenri abalị, ọtụtụ mmadụ ga-eme yariekarịrịhaga-eme n'ụbọchị nkịtị, Tallmadge kwuru. g.
A na-eme Ekele na nri ehihie ma ọ bụ nri abalị?
Na otu ụbọchị, ndị Americarie nri abalịna mgbede, mana maka ebumnuche dị omimi,Ekeleewezuga iwu a maka ọtụtụ ezinụlọ. N'oge mgbe ị na-adaba na post-nri ehihiegrogginess na-arụ ọrụ, na Turkey Day, ị na-ere ahịa gị n'ehihie ehihie maka nri coma zuru ezu.10 nke 2017 Nọvemba
Enwere nri foduru site na nri abalị inye ekele?
Nri Ekele a buru ibu nke mere na ọtụtụ ụbọchị mgbe nri abalị gachara, ndị mmadụ nwere nri fọdụrụnụ - nri agbakwunyela (na-adị) mgbe nri abalị gachara. Ọ bụ ezie na nri fọrọ afọ, a na-eri ọtụtụ nri na ezumike ahụ.
Kedu ihe ị ga-eme ka ị nwee obi ụtọ mgbe ị na-eri nri abalị?
Ndị a bụ ihe atụ nke ihe ndị na-atọ ụtọ ịme mgbe ekelechara nri abalị: 1. Egwuregwu Egwuregwu. Tupu ndị ọbịa abịarute maka nri abalị ekele, dọọ ụfọdụ egwuregwu bọọlụ ebe enwere ike ịhụ ha ngwa ngwa. Mgbe ndị ọbịa bịara, ha ga-achọpụta ma mee ka ha kpọọ egwuregwu mgbe ha risịrị nri abalị.
Kedu nri ndị mmadụ na-eri n'ụbọchị ekele?
10 Nri ọdịnala maka ezigbo nri ekele 1 Turkey. 2 Nri / Uwe. 3 Nduku Nduku. 4 Ahịhịa. 5 Kranberị ihendori. 6 Ọka. 7 Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ agwa agwa. 8 Canadi juru eju. 9 ugu. 10 Pecan achịcha.